नेवाः टाइम्स –
नागा बाबाको जीवन-दर्शन
March 1, 20224mths
November 29, 2021 1 min	7 mths
November 4, 2021 1 min	8 mths
November 4, 2021 8 mths
October 21, 2021 1 min	8 mths
September 27, 20219mths
by बसन्त महर्जन	 March 1, 202204 mths
by बसन्त महर्जन	 November 29, 202101 min	7 mths
by बसन्त महर्जन	 November 4, 202101 min	8 mths
March 1, 2022 0	4 mths
नांगा बाबाहरु निर्वस्त्र हुन्छन्, नानाभातीका अचम्म लाग्दा शब्दहरु बोलेर अनेक उजंग गरेर हिँड्छन। यिनका यी प्रत्येक क्रियाकलापको गूढ रहस्य हुन्छन्।
November 29, 2021 0	1 min	7 mths
November 4, 2021 0	1 min	8 mths
1 min	8 mths
March 1, 202204 mths
(पहिलाे पल्ट नागरिक दैनिकमा १८ फाल्गुन २०७५ मा प्रकाशित)
November 29, 202101 min	7 mths
सामाजिक संजालहरूमा हुने-नहुने, अनेक खालका कुराहरू पाेस्ट भइरहेकाे पाइन्छन् । ती अनधिकृत र आपत्तीजनक पनि हुन्छन् । यस्तै एउटा पाेस्ट हाे, नेपालकाे कुनै गुफामा ३४० वर्ष उमेरकाे जिउँदाे बाैद्ध भिक्षु भेटिएकाे भन्ने हावादारी कुरा। याे पाेस्टले कतिपय मान्छे अलमल्लमा परेका छन् । कतिपयले जानकारीका लागि भनेर मलाई पठाइरहेका छन् भने कतिपयले यस्ताे हुन्छ र ? भन्दै साेधनी गरिरहेका छन् । यस्ता बकम्फुसे कुरालाई वास्तै नगर्दा नि हुन्थ्याे तर फेरि फेरि यस्ता कुराहरूकाे पुनरावृत्ति नहाेस भन्नका लागि केही लेख्नुु पर्ने अाैचित्य देखें ।
यिनी भिक्षुलाई नेपालको पहाडि गुफामा भेट्टाएकाे रे तर कुन पहाडकाे कुन गुफामा भेटिएकाे जवाफ छैन । नेपालमा भेटाएर चीन र थाइल्यान्ड हुँदै अमेरिकाको नासामा पुर्‍याएको रहेछ भन्न चाहिँ भ्याए । “सुरुमा कंकाल भनेछन् पछि चेक जाँचगर्दै जाँदा उनी जिउदै रहेछन् र उनको उमेर ३४० बर्ष पुगिसकेको बैज्ञानिकले समेत प्रमाणित गरिसकेको रहेछ” भन्न पनि भ्याए । याे कुरा पाेस्ट गर्नेले निर्धक्कसँग “यो समाचारले सारा बुद्ध धर्मलम्वि र बैज्ञानिकलाई समेत चकित पारेकोछ” पनि भने तर यस्ताे कुरामा वैज्ञानिकजस्तै बाैद्ध धर्मावलम्वीहरू पनि चकित पर्नु त के वास्तै गर्दैनन् भन्ने कुरा हेक्कामा राखेकै पाइएनन् । विभिन्न व्यक्तिले आआफ्नै ढङ्गकाे कुरा राखेकाे पनि पाइन्छ तर सबैकाे प्रकृति अनर्गल कुरा हालेर एक क्षण रमाउने खालकाे छ ।
तस्बीर मात्रै हाेइन, यसकाे भिडियाे नै पाइन्छ । याे बेग्लै प्रयाेजन वा सन्दर्भकाे सामग्री हाे। लुअाङ फाेर पिअान नाम गरेका एक थाई भिक्षु ९२ वर्षकाे उमेरमा गत वर्षकाे १६ नाेभेम्बरमा मृत्यु भएकाे थियाे । शवलाई विहारभित्रै गाडिएकाे थियाे । त्यहाँ प्रचलित परम्पराअनुसार उनका चेलाहरूले शबकाे पूजा गर्न झिक्दा शवमा खासै क्षति नभएकाे बरू हँसिलाे अनुहार पाइएकाे थियाे । हँसिलाे अनुहारले नै मान्छेहरूकाे ध्यानाकर्षण गरेकाे थियाे । भिक्षुकाे उक्त शवलाई समाएर निर्दिष्ट ठाउँमा पुर्याउन खाेजिराख्ने सहयाेगीहरू थाई रेस्क्यू हुन् । थाई रेस्क्यू प्रहरी नभएर विपद वा त्यस्तै बेलामा सक्रिय हुने उद्धार टाेली हाे। भिक्षुकाे चीवर थेरवादी बाैद्ध सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छ । थाइल्यान्ड थेरवादी बाैद्ध सम्प्रदायकै बाहुल्य भएकाे देश हाे । याे बाैद्ध सम्प्रदायकाे बर्चश्व भएका अन्य मुलुकहरूमा श्रीलंका, म्यानमार, कम्बाेडिया, लाअाेस, भियतनाम अादि हुन् । नेपाल र भारतमा याे सम्प्रदायकाे चहलपहल भएकाे एक सय चानचुन वर्ष मात्रै भयाे । नेपालकाे कुनै पहाडकाे गुफामा ३४० वर्षका बाैद्ध भिक्षु पाइनु हावादारी गफ मात्रै हाे । नेपालमा थेरवादी बाैद्ध धर्म सम्प्रदाय स्थापनादेखि सबै भिक्षुहरूकाे जानकारी यस समाजमा राम्रैसँग पाइन्छ । यसबाट बुझिन्छ, उक्त हावादारी गफलाई सामाजिक संजालमा पाेष्ट गर्ने व्यक्तिलाई बाैद्ध विषयवस्तुकाे जानकारी नै रहेनछ ।
बाैद्ध भिक्षुहरू ध्यानमा जाेड दिन्छन्, सही कुरा हाे । तिब्बती बाैद्ध परम्परामा पनि ध्यानलाई विशेष जाेड दिइन्छ र लामाे समयसम्म ध्यान बस्ने गरेकाे पाइन्छ । तर निकै लामाे र समाजसँग बिलकुलै सम्पर्क विहिन भएर ध्यान गर्ने गरेकाे पाइँदैन । यस्ता विवरण वा कथाहरू अन्य धर्म सम्प्रदाय वा समाजमा प्रचलित मिथकहरूमा मात्रै पाइन्छ । यसलाई यिनै मिथकहरूबाट प्रभावित कल्पना पनि भन्न सकिन्छ । जुनसँग बाैद्ध समाज वा परम्परासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन ।
अन्य समाजमा फलाना देवताकाे आराधना गर्याे भने फलाना लाभ हुन्छ, हाेइन भने काेपभाजनमा परिन्छ, अनिष्ट हुन्छ भनेर तर्साउने वा धम्क्याउने र त्यसैकाे बलमा अन्धविश्वास फैलाएर धार्मिक प्रभाव जमाउने गरेकाे पनि पाइन्छ । यस्ता मिथकहरू ती धर्म सम्प्रदायकाे पहिचान हाे वा यी कुराहरूले धर्म सम्प्रदायलाई बलियाे बनाउँछ भन्ने भ्रम कतिपय धर्मगुरूहरूमा हुन्छन् पनि हाेला तर वास्तविकता त के हाे भने याे धर्म सम्प्रदायकाे बदनाम र कमजाेर यस्तै अन्धविश्वासहरूले गर्दा भइरहेकाे पाइन्छ ।
मानव जातिकाे आयु कतिसम्म हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा ठाेस जवाफ पाइँदैन । पुरापाषाण कालिन मानवकाे सरदर अायु तीस चालीस वर्ष रहेकाे पाइन्छ भने अाजभाेलि नब्बे सय वर्षसम्म बाँच्नेलाई चीरन्जिवी भन्ने गरेकाे पाइन्छ । कुनै खालकाे वाधाव्यवधान नअाउने हाे भने मान्छे २०० वर्षसम्म बाँच्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएकाे पाइन्छ । गाैतम बुद्ध ८० वर्षसम्म बाँचेका थिए । उनकाे सानीअामा प्रजापति गाैतमी र भाइ अानन्द १२० वर्षसम्म वाँचेकाे पाइन्छ । यस्तै दीर्घजीवीहरूकाे अरू विवरण पनि पाइन्छन् तर यी सबै विशिष्ट र अपवादका कुरा हुन् ।
मानव शरीर विज्ञानअनुसार काेही ३०० वा त्याे भन्दा वढी बाँच्नु गफाडी गफ मात्रै हाे । तर विज्ञानलाई चुनाैति दिने खालका मिथकहरूकाे कमी हाम्राे समाजमा छैन । नेपालकाे पहाडी गुफामा पाइएका ३४० वर्षिय बाैद्ध भिक्षुकाे प्रसङ्ग पनि त्यस्तै मिथकबाट प्रभावित व्यक्तिकाे मनगढन्ते कुरा मात्रै भन्न सकिन्छ ।
November 4, 202101 min	8 mths
नेपाल सम्वतका प्रवर्तक मानिएका शंखधर साख्वाःकाे मुहार चित्र भनेर जति पनि प्रकाशित हुन्छन्, फरक फरक पाइन्छन् । मूर्तिहरू पनि यही पारामा बनाइन्छन् । अाधिकारिक मुहार चित्र कुन हाे भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हाे र याे महत्वपूर्ण प्रश्न पनि हाे । नेपाल सम्बतका प्रवर्त्तक शंखधर साख्वा: राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा घाेषणा भइसकेकाे र नेपाल सम्बतले पनि राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेकाे अवस्थामा शंखधरकाे मुहार चित्र मात्रै नभएर अन्य कुराहरूकाे पनि जवाफ खाेज्नु स्वाभाविक हाे । तर याे सम्बतलाइ वर्तमान परिवेशमा याे अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउने काममा एउटा सिंगाे जीवन अर्पिसकेका अभियन्ताहरू समेत अलग अलग मुहार चित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
शंखधर साख्वाःकाे भनी पहिचान गरिएकाे पहिलाे शिलामूर्ति । याे मूर्ति पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेकाे छ ।
नेपाल सम्बतसँग शंखधरकाे नाम जोडिए पनि ती श्रोतहरु वंशावली तथा किम्वदन्तीहरुमा नै सीमित थियो । ऐतिहासिक प्रमाणको अभावमा थुप्रै प्रश्नहरु तेर्सिएको र विवादकै विषयवस्तु भइरहेको अवस्थामा भक्तपुरकाे जेलाटाेलस्थित फल्चामा शिलालेख नै भेटिएपछि ती प्रश्न वा विवादहरुले निकास पाएको थियो, अर्थात् यिनी पनि ऐतिहासिक नै हुन् भन्ने प्रमाणित भयो । कुनै एउटा सम्बतकाे प्रयाेग वा त्यसअनुसारकाे नयाँ वर्षलगायतका कार्यक्रमहरूमा त्यस सम्बतकाे सुरू गर्ने व्यक्तिकाे पनि चर्चा गरिरहनु विश्वमा कमै मात्र अभ्यास पाइन्छ । तर नेपाल सम्बतकाे सन्दर्भमा अलि बेग्लै छ । नेपाल सम्बतकाे सुरूवात बेग्लै ढंगले भएकाे र त्यसमा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा शंखधरकाे याेगदानलाई ध्यानमा राखिएकाे पाइन्छ ।
शंखधर साख्वाःको मुहार भनी अनेकौं तस्वीरहरु बजारमा पाइन्छन् । बेग्लाबेग्लै मुहार वा अाकृति प्रस्तुत गर्ने यी तस्वीरहरूले सर्वसाधारणलाई अलमलमा पार्नु स्वाभाविक हाे । यसमा कसैको नियन्त्रण छैन । जसलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै मुहारका चित्रहरु बनाई बजारमा ल्याउने कार्य जारी छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा अवस्थित एक अज्ञात मूर्तिलाई नै शंखधरको मूर्ति मान्नेहरु पनि पाइन्छन् । तर याे मूर्तिलाइ के कति कारणले शंखधरकाे भनियाे, खुल्दैन । वास्तवमा याे अन्य मूर्ति हाे र यसलाइ शंखधरकाे मूर्ति भन्नु अभियन्ताहरूकाे साेच मात्रै हाे,
एेतिहासिक प्रमाण-प्रमेयकाे अाधारमा दावी गरिएकाे हाेइन । उक्त मूर्तिको अनुहारसँग पनि प्रचलित तस्वीरहरु मिल्दैनन् । त्यही मूर्ति पनि यिनकै हो भन्ने बलियो आधार उपलब्ध छैन ।आधिकारिक संस्थाहरुले प्रचलनमा ल्याउने तस्वीर तथा मूर्तिहरु नै पनि एक अर्कोसँग मेल खाँदैन । के कति कारणले त्यो नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्नु परेको भनेर जवाफ दिने दायित्व पनि पूरा गर्दैनन् ।
नयाँ वर्षकाे उपलक्ष्यमा निकालिएकाे शुभकामना सांस्कृतिक र्याली
विश्वमा काल गणनाका लागि थुप्रै सम्बतहरू प्रचलित छन् । कतिपय सम्बतहरू कालकबुलियत पनि भएका छन् । प्रच लनमा रहेकामध्ये एउटा नेपाल सम्बत पनि हाे । नेपालकाे इतिहासमा काल गणनाकाे एउटा अाधार नेपाल सम्बत पनि रहेकाे छ । नेपाल सम्बतभन्दा अघिकाे काललाइ प्राचीनकाल र नेपालसम्बतकाे सुरूवातबाट मध्यकाल सुरू हुन्छ । नेपाल सम्बतभन्दा अघि पनि नेपालबाटै सुरू भएका केही सम्बतहरू थियाे तर ती चलनचल्तीबाट हराएर पुनः नेपालबाटै नेपालसम्बतकाे प्रचलन सुरू भएकाे हाे । तर याे सम्बत सुरू भएकाे लामाे समयपछिका मात्रै एेतिहासिक स्राेतहरू पाइएका छन्, भविष्य प्राप्त हुनसक्ने संभावनाहरू पनि नभएकाे हाेइन । नेपाल सम्बतकाे प्रचलन राज्यस्तरबाट हटाउने काम अाधुनिक नेपालकाे सुरूवातसँगै भएकाे पाइन्छ । गाेरखाका राजा पृथ्वीनारायणा शाहकाे राज्य विस्तारबाट अाधुनिक नेपालकाे निर्माणपछि पश्चिमतिर प्रचलित शक सम्बतकाे प्रचलन भयाे । याे शक सम्बत प्राचीन नेपालमा पनि प्रचलनमा नै रहेकाे तर भारतीय भूमिबाट थालनी भएकाे एउटा सम्बत हाे । शक सम्बतलाइ पनि बन्द गरी पछि राणा कालमा विक्रम संवतलाइ ठाउँ दिएकाे हाे । तर नेपाल सम्बत राज्यकाे प्रचलनमा नरहेपनि जनस्तरमा भने कायम नै थियाे । प्राचीन भनुँ वा मध्यकालिन नेपाल, त्यसकाे इतिहास मुलतः नेवार समुदाय रहेकाे छ । यसअनुसार नेपाल सम्वतलाइ अाफ्नाे दैनिक जीवनकाे अभिन्न पक्षका रूपमा अंगीकार गरिराख्नु स्वाभाविक हाे । राणा कालमा नै पनि संगठित रूपमा नेपाल सम्बतअनुसार नयाँ वर्ष मान्न ठालेकाे पाइन्छ । त्यही अनुसार पंचायत कालमा नेपाल सम्बतलाइ नेपालकाे राष्ट्रिय सम्बतका रूपमा मान्यता पाउनु पर्ने मागसहित अान्दाेलन नै भयाे र यसकाे नेतृत्व स्वयं नेवार समुदायबाट भयाे । हाल नेपाल सम्वतले राष्ट्रिय सम्वत र यसका प्रवर्तक शंखधर साख्वाले पनि राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा मान्यता पाइसकेकाे अवस्था छ । शंखधरका नाममा विद्यालयकाे पाठ्यक्रममा पनि पठाइन्छ । तर शंखधरकाे नाममा प्रयाेग गरिने अनुहार चित्रहरूमा एक रूपता भने छैन ।
प्रत्येक वर्ष शंखधरकाे मुहार चित्र भनेर नयाँ नयाँ अाकृतिलाइ अगाडि सार्नु इतिहासकाे एउटा पक्षलाइ हलुका रूपमा लिनु हाे । कुनै ठाेस वा एेतिहासिक अाधार नभएकाे अवस्थामा व्यावहारिक प्रयाेगका लागि एउटालाइ सर्वसम्मतबाट कायम गर्नु पर्दछ । अलग अलग मुहार चित्र प्रस्तुत गर्नुकाे न कुनै अाैचित्य छ न त्यसमा कुनै दावी नै पाइन्छ । अब यस्ताे प्रवृत्तिकाे विराेध गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
(लेखकका बारेमा थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नु हाेला)
विशेषतः नेवार समाजमा वर्षको एकपटक नेपाल सम्वत् र शंखधर साख्वाः को खूबै चर्चा हुने गर्छ । खोलाको बालुवा ल्याएर घरमा राख्दाराख्दै सुन भएको र त्यही धनले देशवासीलाई ऋण मुक्त गरी नेपाल सम्वत् शुरु गरेको तिलस्मी कथालाई अनेक तवरले पुष्टि गर्ने कसरत यही बेला हुन्छ ।
विभिन्न जातीय समुदाय रहेको नेपालमा सबैका मौलिक कुराहरू स्वतः नेपाली हो । निश्चित भूगोल र समयमा विकास भएका संस्कृति सम्बन्धित जातीय समुदायको पहिचान बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । जुन जातिका भए पनि ती संस्कृति नेपाली समाजमा समाहित भइसकेपछि त्यो नेपालकै पहिचान हो । यस अर्थमा, औपचारिक रुपमा घोषणाका लागि लोकतन्त्र कुर्नु परेपनि नेपाल सम्वत् त्यसअघिबाटै राष्ट्रिय सम्वत् थियो । नेपालमै उत्पत्ति भएको अरु सम्वत् नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सम्वत् घोषित नेपाल सम्वत्लाई नेवारको सम्वत्भन्दा माथि राखेर हेर्न नसक्नु ताज्जुबको विषय हो ।
नेपाल सम्वत् कसको ?
राणाकालमा विक्रम सम्वत्लाई नेपाल सम्वत् बनाउने गोरखापत्रले नेपाल सम्वत्लाई नेवार सम्वत्का रुपमा प्रस्तुत ग¥यो, पंचायतकालमा । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीे भएको बेला २०६८ मा नयाँ वर्षको अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित शुभकामना समारोहमा नेवार भाषामा सम्बोधन गर्नु त्यसैको उपज थियो । आन्दोलनकारी नेवारहरूले यो दृष्टिकोणको भने दोष अरुलाई भन्दा स्वयं आफूलाई दिनुपर्छ । अरु समुदायलाई बुझाउन नसक्नु, सबै कुरा आफैंमा सीमित राख्नु र समारोह समिति समावेशी नहुनुले नेपाल सम्वत्लाई संकुचित बनाउने काम गरेको छ ।
नेपाल सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्को मान्यता दिलाउने माग भएकोमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला शंखधर साख्वाः लाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरियो । नेपाल सम्वत् सम्बन्धी आन्दोलन नबुझेका एक नेवार मन्त्रीले एक्कासी राष्ट्रिय विभूतिको कुरा अगाडि बढाएर मूल मागलाई विषयान्तर गरिदिए । पछि पुष्पकमल दाहालको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा राष्ट्रिय सम्वत्को घोषणा त भयो, तर यसको प्रयोजनको विषयमा सबै मौन छन् ।
नेपाल सम्वत्को आन्दोलन अहिले विशुद्ध सांस्कृतिक विषयवस्तुमा मात्र सीमित छैन । सम्वत् फेरिंदाको शुभकामना ¥यालीमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्नो झण्डा वा चुनाव चिह्न नै लिएर आउन थालेका छन् । काठमाडौंको बसन्तपुरमा मात्र नभई अन्य ठाउँमा आयोजित शुभकामना कार्यक्रमहरूमा पनि त्यस्तै दलीय सक्रियता देखिन्छ । नेपाल सम्वत्बारे ठोस निर्णय लिनुपर्दा पछि हट्ने गरेका दलहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई भने नेवार समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने अवसर बनाउन थालेका छन् ।
नेपाल सम्वत् आन्दोलनलाई दलका नेता नजिक हुने भ¥याङ बनाउन खोज्नेहरूको कुनै कमी छैन । हरेक वर्षको समारोह समितिको चाबी सीमित व्यक्तिमा हुन्छ । नेपाल सम्वत् र यसका प्रवर्तक शंखधर साख्वाः को नाममा सीमित व्यक्तिले एकखालको धन्दा नै चलाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका नयाँ वर्षहरू मनाउन संस्कृति मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य ठाउँबाट कति आर्थिक सहायता आयो, कहाँ कसरी कति खर्च भयो भन्ने हिसाबकिताब हुने गरेको पाइँदैन ।
नेपाल सम्वत् र राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाः सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने नाममा पनि पैसा खर्च गरिन्छ, तर त्यसको उपलब्धि शून्य छ । यस सम्बन्धमा जति लेख–रचना प्रकाशित गरिन्छन्, ती सबै पुरानै कुराको पुनर्लेखन मात्र हुन् । त्यस्तै, शंखधरको मुहारचित्र भनी दर्जनभन्दा बढी प्रकारका आकृतिहरू ल्याइएका छन् । तिनको आधिकारिकताका सम्बन्धमा भने कोही जिम्मेवार छैनन् । केही आकृतिमा त स्वयं कलाकारको अनुहार देखिन्छ । विभिन्न ठाउँमा राखिएका शंखधरको सालिकका आकृतिहरू पनि एकअर्कोसँग मिल्दैन । शुरुमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको एक जोगीको मूर्तिलाई शंखधर साख्वाः को मूर्ति भनिएको थियो, तर त्यसको ऐतिहासिक पुष्टि भने कहिल्यै गरिएन । मूर्तिको हातमा शंख हुनु नै शंखधर हुनु भनेको त होइन होला !
शंखधरको मूर्ति पहिचान गर्न केही वर्षअघि नेपालभाषा मंका खलःको अगुवाइमा एउटा विशेषज्ञ समिति बनेको थियो । त्यसमा रहेका पद्मरत्न तुलाधर, नरेशवीर शाक्य, भुवनलाल प्रधानलगायतका व्यक्तिहरूमध्ये कोही पनि मूर्ति विज्ञानका जानकार होइनन् । यस्ता हचुवा कामको फेहरिस्त बनाउँदा निकै लामो बन्छ । अर्कोतिर, यसरी शंखधर साख्वाः नामका ती पात्रलाई लिएर प्रदर्शन हुने गरेका अनुरक्तिले अन्य समुदायमा यिनी नेवार समुदायको आदि पुरुष नै पो हुन् भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ । यस्ता बेतुकका चर्चाहरूले स्वयं नेवार समुदायको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक म्हपूजा नै ओझेलमा पर्न थालेको छ ।
(याे लेख पहिलाे पल्ट हिमाल खबर पत्रिकामा १५ कात्तिक, २०७३ मा प्रकाशित भएकाे हाे)
October 21, 2021 1 1 min	8 mths
स्वयम्भू जीर्णोद्धारको शतवार्षिकी समारोह राज्यस्तरबाटै हुनसकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, स्वयम्भूको ऐतिहासिकता अझ उजिल्याउन सकिन्थ्यो ।
काठमाडौंस्थित स्वयम्भू महाचैत्यको निर्माणदेखि आजसम्मको उल्लेख्य जीर्णोद्धारहरूको गणना गर्दा चौंधौं पटकको जीर्णोद्धार हालसम्मको पछिल्लो हो । उक्त जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न भएको पनि सय वर्ष पुग्यो । त्यस बेला जीर्णोद्धार कार्यको जिम्मा पाउने प्रमुख व्यक्ति धर्ममान तुलाधरको परिवारजनबाट १९ अक्टोवरको दिन सय वर्ष पुगेको सन्दर्भमा स्वयम्भू परिसरमा विशेष पूजा गरेर शतवार्षिकी सम्पन्न ग¥यो । सो कार्यक्रममा थोरै आमन्त्रितमा म पनि एक थिएँ ।
स्वयम्भू महाचैत्यकाे जीर्णाेद्धार कार्य हुँदै
पूजा त मुख्य कुरा भइहाल्यो, साथैसाथै त्यस बेला एकआपसमा इतिहास र तत्कालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा पनि स्वभाविक रूपमा चर्चा भयो । यो चर्चालाई नेपाली समाजमा व्यापक बनाउनु पर्ने आवश्यक छ ।
सय वर्षअघि स्वयम्भू महाचैत्यको हर्मिकाभन्दा माथि त्रयोदश भूवनका रूपमा रहेका चक्रावलीहरू उत्तरदिशातिर ढल्केको थियो । यो ढल्काइ तिब्बतको ल्हासादेखि माथि खामदो भनिने ठाउँमा बस्ने महासिद्ध गुरु शाक्यश्रीले पनि थाहा पाएछन् । यो अशोभनीय ढल्काई उनलाई मन परेन । सम्पदा क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलाप तथा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट यस्तो क्षती हुँदै गर्ने भएकाले बेलाबेलामा मर्मत तथा जीर्णोद्धारका कार्यमा ध्यान दिनु पर्दछ । स्वयम्भू महाचैत्यमा भने समयमा नै ध्यान जान सकेको थिएन । महासिद्धले स्वयम्भू महाचैत्यको जीर्णोद्धार गर्ने संकल्प गरे । यसअनुसार आफ्ना शिष्यहरूलाई निरीक्षण गर्न पठाए । यसरी नै जीर्णोद्धार कार्यको जिम्मा ‘धमां साहु’को नामबाट प्रसिद्ध काठमाडौं निवासी धर्ममान तुलाधरलाई दिइयो । धमां साहु तिब्बतको विभिन्न ठाउँमा कोठी संचालन गर्ने ठुलो ल्हासा व्यापारी मात्रै नभएर स्वयं बौद्ध साधक र उनै महासिद्धका शिष्य पनि थिए ।
धमां साहु (धर्ममान तुलाधर)
जीर्णोद्धार कार्यका लागि तीन प्रकारको लगत इष्टिमेट तयार भयो । बाइस, छत्तीस र पचहत्तर हजारको इष्टिमेटमा महासिद्ध शाक्यश्रीको रुची पछिल्लो लगत इष्टिमेटमा प¥यो । यसको लागि आर्थिक भार कसले बहन गर्ने ? स्वयम्भू महाचैत्यको जीर्णोद्धार पुण्य संचयको एउटा राम्रो अवसर हो । यो अवसर सबैले पाउन भनेर जनस्तरबाट चन्दा संकलन गर्ने निर्णय भयो । यसका लागि ‘तालो दावा धाङ्पोही छेश्यार’ को दिन आफ्ना शिष्यहरूलाई आह्वान गरे । यो आह्वानअनुसार प्राप्त नगद तथा जिन्सीबाटै जीर्णोद्धार कार्य लगभग सम्पन्न हुने देखियो । यो भन्दा अगाडि नै धमां साहुले असन धालसिको टोलका साहु रामसुन्दरसँग सल्लाह गरेका थिए र जीर्णोद्धार कार्य थाल्न र सम्पूर्ण खर्चमध्ये एक तिहाई खर्च आफूबाट व्यहोर्ने बचन प्राप्त भइसकेको थियो । धमां साहु आफैले पनि साठी हजारभन्दा बढी चन्दा हालेका थिए । यस बाहेक नेपालमै अन्य सर्वसाधारणबाट पनि चन्दा संकलन भयो । यो धनराशी सम्पूर्ण जीर्णोद्धार कार्यका लागि पर्याप्त भइसकेको थियो ।
जीर्णाेद्धार अघि बनाएकाे चैत्यकाे त्रयाेदश भूवनकाे नमूना
जीर्णोद्धार कार्यका लागि महाचैत्यको निरीक्षण गर्दा स्वयम्भू महाचैत्यको गर्भगृहभन्दा माथि हर्मिका र त्रयोदशी भुवनमा मात्रै काम गर्नु पर्ने रहेछ । त्रयोदशी भुवनका लागि गर्भगृहबाटै उठाइने यःसिं (यष्टी) मा केही खराबी आइसकेको थिएन । यो यःसिं पछिल्लो पटक राजा पृथ्वीनारायण शाहका पनाति राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको शासनकालमा फेरिएको थियो । जीर्णोद्धारका लागि न्यास झिक्नेदेखि पुनः राखेर कार्यसम्पन्न गर्ने बेलासम्ममा अनेकौं पूजाविधि सम्पन्न गर्नु परेको थियो । कार्य सम्पन्नताका लागि महासिद्ध शाक्यश्री तिब्बतमा नै बसी साधना गरिरहेका थिए भने कामको रेखदेख गर्न आफ्ना तीनै जना छोराहरूलाई यहाँ पठाइएको थियो । यसरी नै अन्य सिद्ध गुरुहरूको आगमन गराइएको थियो ।
चैत्यको गर्भगृहमा अनेक कुराको निधान गर्ने परम्परा हुन्छ । स्वयम्भू महाचैत्यको निर्माणदेखि पछिल्लो जीर्णोद्धारसम्ममा अनेकौं श्रद्धालु दाताहरूले बहुमूल्य रत्न तथा अनेकौं कुराहरू चढाइएकोमा सबैलाई यथावत् नै राखी अब तिब्बत तथा नेपालबाट नै प्राप्त कुराहरूलाई पनि गर्भगृहमा राख्ने काम भएको थियो । यसरी नै यस अघि वैरोचन बुद्धको मूर्ति सानो मात्रै थियो, यही अवसरमा मूर्तिलाई ठुलो बनाउने काम भयो । दुई ताराको अवस्थिति मिलेको थिएन, मिलाउने काम भयो । ताराको हस्तमुद्रा पनि उल्टो भइरहेको थियो र सुल्टो पारियो । यी सम्पूर्ण कार्यका लागि जनसहभागिता व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको थियो ।
स्वयम्भू महाचैत्यको चौधौं पटकको जीर्णोद्धार ऐतिहासिक घटना त हो नै, साथसाथै उपासक उपासिकाहरूमा अपूर्व श्रद्धा पनि रहेको ज्वलन्त उदाहरण हो । चन्दा संकलनका लागि स्वयं महासिद्ध शाक्यश्री विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्थे । शिष्यहरूलाई पनि चन्दा संकलनका लागि विभिन्न ठाउँहरू पठाए । पोताला दरवारबाट दश हजार रूपैया प्राप्त भएको थियो । भुटानमा पण्डित शेराव दोर्जे (ढुक्पा लामा) को नेतृत्वमा संकलित चालीस हजार भारतीय रूपैया भुटानी राजा देवाधर्म उग्र्येन वाङ्छुयबाट प्राप्त भयो । यसरी नै सिक्किमी राजाबाट पनि सात हजार प्राप्त भएको थियो । यसरी स्वदेश तथा विदेशबाट संकलित नगदबाट स्वयम्भू महाचैत्यको जीर्णोद्धारका साथै वरिपरि रहेका अनेकौं सम्पदा स्थलको पनि मर्मत संभार गरिएको थियो । स्वयम्भू महाचैत्यको दायाँबायाँ रहेका राजा प्रताप मल्लद्वारा निर्मित शिखर शैलीका प्रतापपुर र अनन्तपुरको पनि जगसम्मै भत्काएर जीर्णोद्धार गर्न संभव भएको थियो । सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर पनि बाँकी रहेको धनराशीबाट खास्ति महाचैत्य र नमोबुद्ध चैत्यको जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न गरिएको थियो । जीणोद्धार कार्य सन् १९१८ मा थालिएको थियो भने सम्पन्न हुन तीन वर्ष लाग्यो ।
ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल स्वयम्भू महाचैत्यको महत्तालाई ध्यानमा राखेर युनेस्कोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ । यसको दर्शनका लागि यहाँ दिनहुँजसो श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा पर्यटकको घुइँचो लागिरहेको हुन्छ । वास्तवमा स्वयम्भू महाचैत्य विश्वकै लागि नेपालको ‘आइकन’ हो । यसको पछिल्लो जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न भएको सय वर्ष पुग्नु पनि एक ऐतिहासिक सन्दर्भ हो । तर यो सन्दर्भका सवालमा नेपाली समाजले हेक्का राख्नै नसकेको देखियो । कैयौं दिनअघिदेखि यसको प्रचारप्रसार तथा तयारी कार्य गरी सेमिनार, गोष्ठी तथा अन्य कार्यक्रमहरूका साथै ठुलै उत्सव मनाउन सकिन्थ्यो । तर, यस दिन स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा धमां साहु अर्थात् धर्ममान तुलाधरका शाखा सन्तानहरू मात्रै भएपनि जम्मा भएर पूजा कार्य सम्पन्न गरे । जीर्णोद्धारको शतवार्षिकीको अवसरमा पूजा भइरहेको भन्ने सन्देश दिने कुनै संकेत त्यहाँ थिएन । सहभागीहरूले बाहेक अरुले सायदै थाहा पाए । यहाँ विभिन्न खालका पूजाहरू दिनहुँजसो भइरहेको हुन्छ र यहाँ आउनेमध्ये धेरैलाई लाग्दो होला, अनेकौं पूजामध्ये यो पनि एउटा त्यस्तै होला ।
पूजाका अवसरमा तुलाधर परिवारले स्वयम्भू महाचैत्यको पूर्वस्थित सत्तलमा महासिद्ध शाक्यश्रीको पनि तस्वीर प्रदर्शनीमा राखेको थियो । संयोगवश यस दिन उनै महासिद्धका एक जना नाती स्वयम्भू महाचैत्यमा घुम्न आएका थिए र आफ्नो हजुर बाको तस्वीर देखेर छक्क परे । गुरु–शिष्यका सन्तानहरूको भेट यस दिन भयो ।
स्वयम्भू जीर्णोद्धारको शतवार्षिकी समारोह राज्यस्तरबाटै हुनसकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, स्वयम्भूको ऐतिहासिकता अझ उजिल्याउन सकिन्थ्यो । साथसाथै यसबाट नेपाली इतिहास र संस्कृतिमा विद्वतवर्गदेखि सर्वसाधारणसम्मको पनि ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्थ्यो । यसैको माध्यमबाट पर्यटकीय गतिविधि पनि बढाउन सकिन्थ्यो । तर यो मौकालाई छोप्न नसकेको अनुभव भयो ।
लेखकका बारेमा थप जानकारी basantamaharjan.com.np
September 27, 202109 mths
बौद्ध अध्ययन क्षेत्रमा बसन्त महर्जनद्वारा लिखित पुस्तक ‘बौद्ध दर्शन सहज चिन्तन’ प्रकाशित भएको छ ।
काठमाडौं । बौद्ध अध्ययन क्षेत्रमा बसन्त महर्जनद्वारा लिखित पुस्तक ‘बौद्ध दर्शन सहज चिन्तन’ प्रकाशित भएको छ । बौद्ध विषयका विविध पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान तथा लेखन कर्म गर्दै आएका लेखकको यो दशौं कृति हो ।
पुस्तक इन्साइट पब्लिकेशन प्रा.लि. बाट प्रकाशित हो ।
September 16, 2021010 mths
सुर्ती उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिने प्रायोजन र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई नदेखिने तवरले गरिने प्रायोजनका कारण सुर्ती नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको छ ।
शान्तलाल मुल्मी, महासचिव, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र
काठमाडौं, ३१ भदौ । सुर्ती उद्योगीको निरन्तरको हस्तक्षेपका कारण सुर्ती नियन्त्रणमा फितलो भइ जनताले स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सुर्ती उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिने प्रायोजन र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई नदेखिने तवरले गरिने प्रायोजनका कारण सुर्ती नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा खुलमखुला धुम्रपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सुर्तीको विक्रिवितरण गर्न रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा फितलो हुनुको कारण सुर्ती उद्यमी व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष हात रहेको देखिएको अध्ययनकर्ता एवम् प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए ।
सलोनी सिंह, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेप विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाहरुले समेत सुर्ती सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको बताउँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा. राजेस सम्वाजिराओ पाण्डवले नेपालमा तीनजनामा एकजनाले अर्थात एक तिहाइ जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत पुरुषले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक रहेको जानकारी दिए । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन –जीडीपी)को १ दशमलव ८ प्रतिशत सुर्ती सेवनमा खर्च हुने गरेको पनि बताए । वर्षेनी २५ हजार मानिस सुर्तीकै कारण मर्ने गरेको र सुर्तीकै कारण नसर्ने रोग लागेकाहरुको मृत्यु सरदर आयुभन्दा अगावै मर्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले सुर्तीमा करवृद्धि गरी निरुत्साहन पार्नुपर्ने, सुर्तीरहित क्षेत्र घोषणा र सवै किसिमका सुर्ती प्रचार, प्रवद्र्धनलाई निरुत्साहित पार्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थिए ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्ती नियन्त्रणका लागि समयसान्दर्भिक रुपमा कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेकाले ७ ओटा विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको बताए ।
अध्ययन प्रतिवेदनसम्वन्धी प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्ययनकर्ता मुल्मीले चुरोट खुलमखुलम रुपमा अस्पतालको छेउछाउमा समेत विक्रि वितरण र सेवन भइरहेको, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनका लागि र बजेट सकाउनका लागि मात्र सुर्ती नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी दिए।
September 15, 2021010 mths
यँयाः अर्थात् इन्द्रजात्रा
अचेल यसरी गीत गाएर समेबजि माग्न आउने चलन काठमाडौंको मुख्य शहरी भागहरुमा हराउन थालेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष विशेष तामझामका साथ मनाइने जात्रापर्वहरुमा एक यँयाः पनि हो । यँयाःलाई इन्द्रजात्रा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । तर यो जात्रासँग सम्वन्धित काठमाडौंका नेवारहरु बोलिचालीको भाषामा यँयाः नै भन्ने गर्दछन् । यस अवसरमा काठमाडौं हनुमानढोका वरिपरि विभिन्न साँस्कृतिक गतिविधिहरु भइरहको हुन्छ । भक्तपुरको नालाबाट ल्याइने लिंगो विधिवत् द्वादशीको दिनमा हनुमानढाेका परिसरमा ठड्याएपछि इन्द्रजात्रा सुरु भएको मानिन्छ । लिंग ठड्याएर त्यसको तलतिर घोडा चढेको इन्द्रको प्रतिमा प्रर्दशनीमा राखिन्छ । यसलाई इन्द्रध्वजोत्थान भनिन्छ ।
इन्द्रजात्रा सुरु हुने दिनको साँझदेखि उपाकू वनेगु भनेर काठमाडौंका विभिन्न ठाउँहरु घुम्ने चलन पनि रहेको छ । विशेषतः यो दिन घरमा कोही मरेको छ भने उसको सम्झनामा हातमा धूप लिई स्तोत्र (तुतः) पाठ गर्दै ठाउँ ठाउँका चैत्य तथा अन्य धार्मिकस्थलहरुमा पूजा गर्दै अगाडि बढ्ने हुन्छ । यसरी घुम्ने निश्चित मार्ग हुन्छ जुन प्राचिन शहरको सीमा हो ।
एउटा कथाअनुसार स्वर्गका राजा इन्द्रले आफ्नो आमाको लागि पारिजातको फूल (कसै कसैले ‘चथाः स्वां’ पनि भन्ने गर्दछन्) लिन आउँदा नेपालमण्डलको ख्यः केवः भिमसेनस्थान (भिंद्यः) को तलतिरको स्थानमा आएका थिए । उक्त समयमा गथु (मालि)ले देखेर फूल चोर भनी डोरीले बाँधी राख्दछ । यसरी देवराज इन्द्र बाँधिएर पृथ्वी लोकमा नै रहेपछि इन्द्रलाई लिन आमा पृथ्वीमा आएको प्रसंगअनुसार यहां आउदा धान पाक्नका लागि आवश्यक हुस्सु (खसु) दिएर गएको मानिन्छ । यसैले अहिलेको मौसममा विहान र बेलुकी हल्का हुस्सु आउने विश्वास गरिन्छ । यसलाई इन्द्रको आमाको उपहार मानिन्छ । यस उत्सबमा देखाइने देवी नाचमा सेतो पहिरनमा डाँगी (राक्षसनी) निकालिन्छ ।
देवराज इन्द्र पृथ्वी लोकमा रहँदा उनका आमा दागीं (राक्षसनी)को रुपमा यहाँ आउदा यहाँका मानिसद्वारा मानिसहरुलाई मृत्यू पश्चात् मोक्ष दिलाउनु पर्छ भनी बचन बाधिए पछि मात्र देवराजलाई छोडिएको कथनले पनि यस कुरालाई पुस्टि गर्दछ ।
यसलाई इन्द्रराजको आमा भेष बदलिएर पृथ्विमा आएको मानिन्छ । यस समयको मौसम पानी पर्न रोकिएको भएपनि घरी घरी बादल लाग्ने, हल्का बर्षा पनि हुने र कहिले घाम लाग्ने हुन्छ । यस मौसममा परेको बर्षालाई इन्द्रराजको आमाले छोराको वियोगमा झारेको आँसु पनि मान्ने गरिन्छ । यसरी परेको बर्षा, बिहान, बेलुकी लागेको हुस्सु र दिउँसो लाग्ने चर्को घाम धान पाक्नका लागि औषधि नै मान्ने गरिन्छ । दशै तिहार सकिएपछि धान पाकिसक्ने हुनाले वाकू थनि अर्थात अन्न भित्राउने कार्य गरी उचित संरक्षणमा भण्डारन गरी अन्नको जोह गरिन्छ । अन्नको सही उत्पादन र सम्रक्षणले नै मानिसहरुलाई बर्ष भरिको लागि अन्नको अभाव नभई सुखी हुने हुनाले ञमाःद्यःसँग यंया पुन्हिमा अन्न मागिन्छ ।
ठाउँ ठाउँमा बाधेर राखिएको देवराज इन्द्र (ञँमा द्यः) को हातमा जनै पूर्णिमामा मानिसहरुले हातमा बाँधिएका जनै बाध्न लाने चलन नेवार समाजमा रहेको कुरा विज्ञहरु बताउनु हुन्छ । यस्तो चलन नेवार समाजमा भए पनि आजभोलि तिहारमा गाईको पुच्छरमा नै बाध्ने चलन छ । जनै गाईको पुच्छरमा बाँधेपछि वैतरणी तर्न सजिलो भई मृत्युपश्चात स्वर्ग जान पाइन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको पाइन्छ । देवराज इन्द्र स्वर्गका राजा नै भएको हुँदा सिधै स्वर्ग जान पाइने धारणा हाम्रो पूर्वजहरुको भए पनि आजभोलि यो चलन पनि लोप भई सकेकै देखिन्छ ।
यस पर्वका अवसारमा विशेष गरी समेबजि खाने पनि गरिन्छ । यही भएर यसलाई स्याः बजि नखः पनि भनिन्छ । यस अवसरमा टोल टोलमा समे सजाएर राखिन्छ र सो समेबजि सार्वजनिक रुपमा बाँडेर खाने गरिन्छ । घर घरमा पनि समे राखेर भोज खाइन्छ । इन्द्रचोकको आजु द्यः (भैरव देवता) अगाडि समे सजाउनुका साथै आजुद्यः को थ्वँ (जाँड) को तेप (घ्याम्पो)मा पंचकार पूजा गरि जाँड (थ्वँ) राखिन्छ । लाय्कु (बसन्तपुर)को श्वेत भैरव (हाथु द्यः) लाई पनि पंचमकार पूजा गरि हाथु हायेकेगु (रक्सी) गरिन्छ ।
ञँलाथ्व एकादशीदेखि बेलुकी पख घर घरमा दलूचा (माटोको झुन्डाएर बत्ती बाल्ने परम्परागत शैलीको भाँडो) मा बत्ती बालेर ञँमाःद्यःलाई समे सहित पूजा गरिन्छ ।
विभिन्न स्थानहरु (मरुमा मरु सतः नजिकै सिँल्यं सतःको तल गः कुतिको अगाडि, वंघ–इन्द्रचोकको अगाडि,न्यतः–नरदेवीको दबुमा, किलागःको कुनां टोलमा,ज्याथामा) लिंगो उठाएर त्यसको चारकुनामा चारवटा काठको हात्ती राखेर खम्बा गाडि यसको माथि ञँमाःद्यः प्रदशनिको लागि राखिन्छ । ञँमा द्यः सुनको मोलम्बा सहितको हुने गरिन्छ ।
चर्तुदशीको दिनमा कुमारी माजुको रथ तान्न शुरु गरिन्छ । थःने र क्वने गरी दुई दिन रथ तानिन्छ र अन्तिम दिन सो रथ यात्रा किलागल टोलतिर लगिन्छ जसलाई नानिचायाः भनिन्छ । नानिचायाः सुरुदेखिको साँस्कृतिक अभ्यास नभएर शाह वंशीय राजा रणबहादुरको बेलादेखि मात्रै सुरु भएको भनाइ रहेको छ । यसपछि जात्रा सकिन्छ । रथ ल्याउने बाटोको दबूमा द्यः प्याखं (देव देवीका नाच) देखाइरहेको हुन्छ । यसरी नाच भइरहेको स्थानमा रथ पुगेपछि रथ एकछिन रोकाएर कुमारी माजुलाई नाच देखाइन्छ र कुमारी माजुबाट भेटी (पैसा) चढाइन्छ । यस अवसरमा घर घरबाट कुमारी माजुलाई पूजा पनि चढाइन्छ । इन्द्रचोकमा रथ पुगे पछि आजू द्यः समूहबाट पूजाको साथै जाँड पनि चढाइन्छ । बसन्तपुर दरवार क्षेत्र (लायकु)मा रथ पुगेपछि पूजाको साथमा रक्सी चढाईन्छ । यसलाई नेपालभाषामा हाथु हायेकेगु भनिन्छ । यस अवसरमा समे र रक्सी बाँडिन्छ । यो प्रसाद खाएमा पेटको रोग पनि निको हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
नेवार समाजमा समेबजिको विशेष महत्व रहेको हुन्छ र इन्द्रजात्राका अवसरमा समेबजिलाई प्रमुख प्राथमिकता नै दिइएको हुन्छ । जुन जुन क्षेत्रमा कुमारी रथयात्रा सम्पन्न हुन्छ, सो क्षेत्रका नेवारहरु हर्षोल्लास गर्दै समेबजि बाँडेर खाने गर्दछन् । यस दिन घर घरमा साँझ दलूमा बत्ती बाली समेसहित पूजा गर्न सकिएपछि बाहिर आएर समे बाँड्ने गरिन्थ्यो तर अचेल यो चलन हराउन थालेको छ । केटाकेटीहरु ‘ला छकू वयेक समे बजि’ बोलको गीत गाएर समेबजि माग्न आउने परम्परा पनि छ ।
अचेल यसरी गीत गाएर समेबजि माग्न आउने चलन काठमाडौंको मुख्य शहरी भागहरुमा हराउन थालेको छ । तर मान्छेहरुलाई यो गीतको सम्झना भने अझै पनि देख्न पाइन्छ । काठमाडौंको मुख्य भागबाहेक अन्यत्रका नेवार टोलबस्तीमा आफ्नो प्रचलनअनुसारको दिनमा प्रत्येक घरबाट पिखालखुमा बसेर समजेबजि दिने चलन अझै पनि कायम नै छ । र, यस बेला केटाकेटीहरु ‘ला छकू वयेक समेबजि बोलको गीत गाएर समेबजि माग्न हिड्छन् ।
अन्तिम दिन शास्त्रअनुसार राति यःसिँ धालिन्छ र त्यसलाई सेलाएपछि विधिवत् इन्द्रजात्रा सकिएको मानिन्छ ।
September 10, 202101 min	10 mths
चथाः – नेवार समाजमा प्रचलित महत्वपूर्ण चाड
नेवार समाजमा प्रचलित विभिन्न चाडहरुमा चथाः एक महत्वपूर्ण चाड हो । दशैंको एक महिनाअगाडि पर्ने यो चाडलाई सानो दशैं पनि भन्ने गरिन्छ
नेवारहरु जून सुकै जात्रा, चाडपर्व वा संस्कारजन्य कर्महरु गर्दा विशेष पूजा गर्दछन् । चथाः पनि दशैं आउन लागेको शु–सन्देशमा मनाइने चाड भएको हुनाले यस चाडलाई पनि दशैं सरह महत्वका साथ मनाइन्छ । यस दिन आगंद्यः ( देवता), दिगुद्यः (कूल देवता) लाई चथाःस्वां (करवीरको फूल), मोहनि (दशै) को मोहनिस्वां र लक्ष्मी पूजाको लक्ष्मीस्वा (फूल) चढाएर पूजा गरी भोज खाने गरिन्छ । यस दिन चथाःद्यःको चा (रात्री) पूजा हुने भएको हुनाले रातमा मात्र भोज खाने गरिन्छ ।
नेवार समाजसँग सम्बन्धित जुनसुकै जात्रापर्व मनाउनु केही दिन अगाडि नै उक्त पर्व आउन लागेको उपलक्ष्यमा जात्रापर्वसंग सम्बन्धित देवताहरुको पूजा गरी आमन्त्रित गर्नुका साथै यदि गुथि वा व्यक्तिहरु सम्बन्धित छन् भने ती व्यक्तिहरुलाई पनि आमन्त्रित गरी सानो पूजा गरी भोज खाने चलन छ ।
चथाःद्यःलाई रातको समयमा मात्र पूजा गरिन्छ । रातमा शहर सुनसान भएपछि जब कुकुरहरु भुक्न थाल्छन्, तब मानिसहरु भन्न थाल्छन् ‘कुकूरहरु भुक्न थाले “चोर आयो कि के हो ?” । यस्तो भन्नुको आशय रातको प्रहरमा जव कुकूरहरु भुक्न थाल्छन् तव चोर आएको माने झैं चथाःद्यः को आगमन पनि रातको प्रहरमा मात्र हुने विश्वासमा रातमा सबै घरमा आइसकेपछि कुकूरहरुले भुक्न थालेपछि मात्र चथाःद्यःको पूजा गर्नु पर्छ भनिएको हो । चोरलाई मिठो मिठो खुवाउन हुदैन चोर पल्किन्छ भनी यस दिन चथाःद्यःलाई काँचो लप्सि, तर्रो नासपाती, काँचो अदुवा, हरियो खुर्सानी, बस्पति पु (आरुको बियाँ) को साथमा भुटेको गहुँ, भटमास, मकै, केराउ आदि चढाइन्छ । यसरी अमिलो र तर्रो फलफूलले मुखको स्वाद बिगारेर दाँत कुँडेपछि टोक्न गा-हो हुने गरी भुटेको गेडागुडी चढाएर चोरलाई भगाउन खोजिएको अभिप्राय हो । यस दिन चन्द्रमालाई हेर्न हुँदैन भनिन्छ तर वास्तवमा चन्द्रमालाई हेर्न हुदैन भनिएको नभई चथाःद्यः (इन्द्र) लाई देखिएला भनि यस्तो भनिएको हो किनभने चोरलाई हेर्न हुँदैन वा चोर समातिएको ठाउँमा गयो भने चोर दोष लाग्छ भन्ने गरिएको हुदाँ यस्तो भनिएको हो ।
September 9, 2021010 mths
भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज महादेवको पूजा आराधना गरी हिन्दु महिलाहरूले मनाउँँदैछन् ।
काठमाडौं, २४ भदौ । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज महादेवको पूजा आराधना गरी हिन्दु महिलाहरूले मनाउँँदैछन् । हिन्दु ब्राम्हण क्षेत्री समुदायका महिलाहरूले मनाउने चाड भए पनि पछिल्लो समय अन्य समुदायका महिला पनि यो चाड मनाउन तथा चाडमा रमाउन थालेका छन् ।
परम्परागत रुपमा भाद्र शुक्ल द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म चार दिन मनाइने यस चाडको आज विशेष दिन मानिन्छ । आजको दिन महिलाहरू व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याण प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास गर्दछन् ।
धार्मिक विश्वास अनुसार पार्वतीले तपस्या गरेपछि महादेव पति पाउने बरदान पाएकी थिइन् । तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसित विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाइन् ।
पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरूले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाए । साथीहरूले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई पतिका रुपमा प्राप्त गरिन् ।
पार्वती साथीहरूद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका तीजको व्रत लिने प्रचलन शुरु भएको मानिन्छ । सत्ययुगमा आजैको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले महादेव श्रीमान पाएकीले आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ ।
आजको दिन पानी पनि नखाई ब्रतबस्नु पर्छ भन्ने मान्यताले यसलाई कठिनतम ब्रत मध्येको मानिन्छ । ब्रत बसेर महिलाहरू नजिकैको शिवालयमा पूजाआजाका लागि जाने गर्दछन् । अघिल्लो वर्ष कोविड १९को संक्रमणका कारण पशुपति तथा मन्दिरहरू खुलेनन् भने आज पनि पशुपति नखुले पनि महिलाहरू बाहिरै पूजा गरेर फर्किदै आएका छन् । पशुपतिनाथ लगायत मुख्य मन्दिर बैशाख १५ यता बन्द छन् । पूजा गरेपछि मन्दिर परिसरमैं नाच गान गरेर रमाएर बस्ने महिलाहरू तथा पुरुष जमात पनि यो वर्ष छैनन् ।
स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राखेर आजकल कतिपय महिलाहरू जलाहार, फलाहार गरी ब्रतबस्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय चिकित्सकले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर मात्र व्रत बस्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य, मुख्यमन्त्री, वागमती प्रदेश
यसैबीच, वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले तीजको शुभकामना दिँदै कोभिड १९ संक्रमण जोखिमबाट जोगिनका लागि सरकारले निर्धारण गरेको जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै मौलिक संस्कृति तथा परम्परालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न अपील गरेकी छन् ।
मुख्यमन्त्री शाक्यबाट तीजको अवसरमा जारी गरिएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘तीजले नेपाली महिलाहरूलाई समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद, जातीय विभेद लगायत सबै प्रकारका असमानताहरूको अन्त्य गर्दै समतामूलक प्रगतिशील समाजको निर्माणतर्फ अग्रसर हुन उतप्रेरित गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।’
शुभकामना सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूले सबै नेपालीहरूको बीचमा विविधतामा एकता, धामिक सहिष्णुता, पारिवारिक मिलन तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेका हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ । तीजको मौलिकतालाई कायम राख्दै यसको सांस्कृतिक महत्वको जगेर्ना गर्न यो पर्व मनाउने सन्दर्भमा देखिने गरेको खर्चिलोपनलाई हटाउँदै जानु अति आवश्यक रहेको छ ।’
गत वर्ष घर तथा घरको आंगनीमा मात्र सीमित भएको तीज यो वर्ष भने केही महिलाहरूले सामुहिक रुपमा दर खानुकासाथै थोरै संख्यामा भए पनि मन्दिर गएको देख्न सकिन्छ ।